Izikibha / ipolo → Izembatho zokusebenza • Imfekethiso yekhompyutha ye-P & M
Izikibha / ipolo kungukukhetha okubanzi amahembe aphezulu Iphelele ukusetshenziswa kwansuku zonke, kokubili kwabasebenzi nezingubo zokukhangisa.
Ukuhlukahluka okukhulu kwemikhiqizo kukuvumela ukuthi ulungise ukuthengwa kwezidingo zakho kumikhakha ye-premium neyejwayelekile. Izikibha ziyatholakala ngemiklamo, izitayela nemibala ehlukahlukene, ngezingalo ezimfishane nezinde. Ngaphezu kwama-T-shirts / ama-polos wendabuko, sinikela ngezikibha eziyisixwayiso ezinezakhi ezibonisa.
Izinga eliphakeme lama-t-shirts liqinisekisa ukuthi ikhwalithi yawo iyagcinwa ngemuva kokuwashwa okuphindaphindwayo, futhi isisindo sawo esifanele siqinisekisa ukuthi bagcina ifomu labo langempela isikhathi eside.
Ukunakekelwa okukhethekile kufanele kukhokhwe ekuqoqweni kwezikibha ezenzelwe ubuchwepheshe KUSEBENZA-KOMELEesebenza kahle kakhulu ezimeni ezinengozi enkulu yokujuluka. Izambatho ezinjalo zingasetshenziswa hhayi kuphela ngaphakathi kodwa nezakhiwo ezingaphandle, ngokuya ngezidingo.
Izikibha / ipolo - nsuku zonke kinduduzo yokusebenzisa
Izikibha / ipolo ithungwe ngokunaka imininingwane. Ukulungiswa kobuhle emininingwaneni kukwenza kube ngumkhiqizo ozosebenza ezimbonini eziningi nangokusebenza komzimba okwandisiwe. Zakha isethi yamapharamitha wokusebenza afanele. Amanani wokuncintisana nokukhethwa okubanzi kubaluleke kakhulu lapho uthenga izembatho zomsebenzi zabasebenzi bonke.
Izikibha ezenziwe ngezindwangu eziguqukayo nezithambile ukuthinta zinika umuzwa wenduduzo ngesikhathi zisetshenziswa. Ngenxa yezindawo zabo, bazivumelanisa nomzimba ngenkathi beqinisekisa inkululeko yokuhamba. Izinto eziphefumulwayo zinciphisa ubungozi bokujuluka ngokweqile, okubaluleke kakhulu emazingeni okushisa aphezulu.
Kutholakala ku- isitolo Izikibha / ama-polos ayaziswa ngokwakhiwa kwawo kwendawo yonke, okungaphelelwa yisikhathi.
Zithandwa kakhulu Izikibha zekhwalithi ye-premiumezingenayo imigqa eseceleni.
Indwangu yekhwalithi ephezulu izomelana nokusetshenziswa okunamandla kakhulu. Kuyaphawuleka ukuthi isithombe sabasebenzi sinomthelela ekubonakaleni komkhiqizo. Kungalesi sizathu ukuthi ukutshalwa kwezimali kwezingubo ezisezingeni eliphakeme kubalulekile ukugcina ubukhona obungenakuphikiswa ngemuva kwamasonto amaningi okusetshenziswa. Ngenxa yenani elincintisanayo, ukukhetha izingubo zabasebenzi ngeke kube umthwalo omkhulu wezezimali.
Izikibha zabasebenzi izimpawu eziyisixwayiso yimikhiqizo ehlangabezana nazo zonke izindinganiso ezikhona njengamanje zokugcina imithetho yezokuphepha. Benza ngcono ukubonakala hhayi kuphela ngaphakathi kwesakhiwo, kepha nangaphandle. Ukunikezwa kwethu kufaka kuphela amamodeli wekhwalithi ephezulu kakhulu avela kubakhiqizi abanedumela elihle. Ziza ngokuhlukahluka okuningana, okwenza kube lula ukukhetha okuthile okufanelekile.
Inzuzo enkulu iqiniso lokuthi izakhiwo zihlala ngisho nangemva kokugeza okuningi. Izikibha eziyisixwayiso zenziwe ngezinto eziqinisekisiwe ezingacasuli isikhumba noma zidale imiphumela emibi. Ngenxa yesisindo sayo esiphansi, ngeke kube umthwalo ezimweni zokushisa okuphezulu. Zifanele bobabili ubulili.
Izikibha zonyaka ngamunye
Izikibha ezinikelwe ezinemikhono emide zingaba umphelelisi ophelele wesethi yezimpahla zabasebenzi. Amamodeli atholakalayo aqediwe ngokunaka yonke imininingwane, ezokwanelisa ngisho namakhasimende afunwa kakhulu. Ukuqiniswa kwamateyipu kusiza ekugcineni ifomu elifanele futhi kunciphise ubungozi bendwangu ebolile. Izinto eziqinisekisiwe zizwela ngisho esikhunjeni esibucayi.
Onke amamodeli alungele i- ukugqokwa kwamakhompyutha. Izikibha / i-Polówki enelogo yakho idinga ukwakheka okukodwa okuzofanelana ngokuphelele nokuthandwa yikhasimende. Ukwenziwa kwe-oda kuqala kuphela ngemuva kokuvunywa okugcwele kweklayenti.
Ngenkathi sisebenza, sisebenzisa okuthuthukile imishini epaki yethu yemishini. Ngenxa yalokhu, lokhu kuhumusha kube ngokunemba okuhlukile kokusebenza - ngisho nemininingwane emincane izocwengisiswa ngokuphelele.
isikibha esimhlopheisikibha sabesifazane esimhlophe esinokuphrintaisikibha esimhlophe esinokuphrintai-Corp frame tee - isikibha sokuphrintaisikibha esimnyama esinokuphrintaisikhungo esomile - isikibha esinokuphrintaukuqagela kunqampuna - isikibha esiphrintiweIsikibha se-hm esine-printI-jasa - isikibha esinokuphrintaI-logo tee - isikibha esinokuphrintamonogram ephaketheni slim tee - isikibha esinokuphrintaingcaca ephelele - isikibha esiphrintiwePhinda isikibha esinokuphrintiweihembe le-robloximivimbo tee - isikibha sokuphrintai-t-shirtIsikibha sokubeletha esine-printisikibha sabesifazaneizikibha zabesifazane ezimhlophe eziphrintiweisikibha sabesifazane esinokuphrintaT-shirt yezingane ezinephrintaisikibha sezingane esinokuphrintaisikibha esinemikhono emifushane sabesifazane esinokuphrintaIsikibha sabesilisaT-shirt yabesilisa bakwa-Esgroisikipa sowesilisa esine-printIsikibha sabesilisa esinezimpawu ezimhlopheisikibha sabesilisa esinyathelisiwe ngesithuthuthuisikibha se-t-shirtisikibha se-robloxisikibha esingu-tommy hilfigerizikibha eziphrintiweT -hembe nge-3d ephrintiweizikibha eziphrintiwe ze-etigroisikibha esinokuphrinta kwe-bustisikibha esine-allegro yabesifazane ephrintiweizikibha ezinenkampani ephrintiweizikibha nge-gliwice ephrintiweisikibha esinokuphrinta kowesilisaisikibha esinokuphrinta kwegundane le-mickeyizikibha eziphrintiwe emhlaneisikibha sokuphrinta ngokwezifisoizikibha eziphrintiwe ngebhayisekiliisikibha esibhalwe ubusoisikibha esinokuphrinta kweWarsawIsikibha esinemibhalo ephrintiweisikibha esinokuphrinta kwakhoT-shirt ngephrinta yasempumalangaisikibha esinokuphrinta kwakhoisikibha esinombhalo waso wokuphrintaIsikibha se-talan - ephrintiweisikipha esiphelele - esishicilelwe